Real Madrid oo ka walaacsan xaaladda dhaawac ee Eduardo Camavinga kahor kulammada xulalka – Gool FM
(Madrid) 04 Okt 2021. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa ka walaacsan xaaladda dhaawac ee xiddigeeda khadka dhexe ka ciyaara ee Eduardo Camavinga.
Da’yarka reer France ayaa laga saaray qaybtii nasiinnada ee ciyaartii ay shalay Los Blancos guuldarrada kala kulantay naadiga Espanyol maadaama uu xanuun dartiis awoodi waayay inuu sii ciyaaro kulankii La Liga ka tirsanaa ee naadigiisa looga adkaaday 2-1.
Camavinga ayaa ka xanuunsanaya dhaawac kasoo gaaray qaybta kore ee cagta halkaas oo ay shalay markii saddexaad jug kasoo gaartay muddo hal toddobaad gudaheed ah waxaana lagu soo warramayaa inuu awoodi la’yahay xirashada kabaha buudka barar awgiis.
Si kastaba ha ahaatee, 18-sano jirkan ayaa lagu daray xulka qaranka Faransiiska ee ciyaaraya UEFA Nations League isla markaasna Khamiista la balansan xulka Belgium hase ahaatee, waxa uu mari doonaa hubin caafimaad taasoo go’aamin doonta midkood inuu xulka kasii mid ahaado ama inuu kusoo laabto Madrid.
"Loollanka horyaalka waa uu dhammaan lahaa haddii Manchester City ay..." - Garry Neville